मास्कमा मनपरी, के भन्छन् डाक्टर ? - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
कोरोना महामारीमा कुनै पनि व्यक्तिको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि मास्क अनिवार्य बन्दै गएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जारी गरेको न्यूनतम मापदण्डमा मास्क, स्यानिटाइजर र सामाजिक दुरी कायम गर्नु नै व्यक्तिको मुख्य सुरक्षा कबच मानिएको छ ।
कोरोना महामारी पछि मास्कको प्रयोग अनिवार्य बन्दै गयो । बालबालिका देखि ज्येष्ठ नागरिकले अनिवार्य रूपमा लगाउन थालेपछि मास्कको अभाव पनि भयो ।
हामीले प्रयोग गर्ने मास्कको रङ्ग गाढा रङ्गको नभएर उज्यालो रङ्गको हुनु पर्छ । गाढा रङ्गको मास्कमा फोहोरहरू नदेखिने भएकाले उज्यालो रङ्गको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
कपडाको मास्क छनोट गर्दा त्यसको फेब्रिकमा ध्यान दिनु पर्छ । २ देखि ३ पत्रबाट बनेका र भित्री पत्र सुती र बाहिरी पत्र पोलिस्टरको हुनुपर्छ ।
मास्कको मूल्य र गुणस्तर कस्तो हुनु पर्छ ? यो सबैको चासोको विषय हो । तर मास्कको मूल्य हेर्ने हो भने सडक किनारमा पाइने ३ रूपैंया प्रतिगोटा पर्ने मास्कको १० रुपैयाँ तिर्नु पर्छ । औषधी पसलमा पनि प्रति गोटा मास्कको १० रुपैयाँ नै पर्छ भने किराना पसलमा प्रतिगोटा मास्कको ५ देखि १० रुपैयाँसम्म पर्छ ।
कोरोना भाइरसको महामारी र वायु प्रदूषणबाट बच्न बजारमा पाइने मास्कहरू सही तरिकाले प्रयोग गरेमा सबै किसिमका मास्क सुरक्षित नै मानिन्छन् । यदि हामीले मास्क लगाउँदा नाक र मुख छोपेर लगाउँछौ भने त्यो सही तरिका हो ।
सर्वप्रथम हात धुने वा स्यानिटाइजरले हात सफा गर्ने । प्रयोग गरिने मास्क फोहोर छ÷छैन प्वाल परेको छ÷छैन राम्ररी हेर्ने । मास्कको फित्तामा समातेर कानमा लगाउने र मास्कको माथिल्लो भागमा भएको तारलाई नाकमा अड्याएर थिच्ने ।
हामीले प्रयोग गर्ने मास्कको रङ्ग गाढा रङ्गको नभएर उज्यालो रङ्गको हुनु पर्छ । गाढा रङ्गको मास्कमा फोहोरहरू नदेखिने भएकाले उज्यालो रङ्गको प्रयोग गर्नुपर्छ । उज्यालो रङ्गको मास्क प्रयोग गरेमा छिट्टै फोहोर हुन्छ र सफा गरिन्छ र सङ्क्रमण हुनबाट समेत जोगाउँछ ।
(ओम अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर तथा कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डा. विश्वनाथ कोइराला र फिजिसियन डा. दीपा केसीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)